सावधान ! धेरै पैसा कमाउन खोज्दा रातमा काम गर्दा हुन्छ क्यान्सर – Etajakhabar
सावधान ! धेरै पैसा कमाउन खोज्दा रातमा काम गर्दा हुन्छ क्यान्सर
काठमाडौँ – संसारमा कैयौँ यस्ता संस्था छन्, जहाँ रातको समय काम गर्नुपर्छ । नाइट सिफ्टमा पुरुषले मात्र नभएर महिलाले पनि काम गर्छन् । तर, लामो समयसम्म नाइट सिफ्टमा काम महिलाका लागि खतरा हुने चीनमा भएको एक अनुसन्धानले बताएको छ । नाइट सिफ्टमा लगातार काम गर्ने महिलामा विभिन्न क्यान्सरको सम्भावना बढेर जाने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नाइट सिफ्टमा लगातार काम गर्ने नर्सहरूमा ब्रेस्ट क्यान्सर देखिएको र उनीहरूमा यस्तो क्यान्सरको सम्भावना पनि बढी रहने अनुसन्धानले देखाएको छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: ७:१८:११